‘शिक्षकले चाहेमा गर्न सक्छन्’ अभियान सामुदायिक विद्यालयको सुधारलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर थालिएको एउटा अभियान हो । जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुको सक्रिय संयोजनमा शिक्षकलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर यो अभियान सञ्चालन गरिदै आएको छ ।
नेपालको सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा चिन्तनशील शिक्षाविद्हरु, विद्यालय शिक्षा सुधारमा दत्तचित्त प्रधानाध्यापकहरु, शिक्षामा कलम चलाउने पत्रकारहरु, शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरु र नेपालको सामुदायिक विद्यालयहरुको खस्कँदो अवस्थाप्रति चित्त दुखाउनेहरुको सक्रियतामा संचालित उत्प्रेरणात्मक अभियान हो ।
नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरु खत्तम भए, शिक्षकहरुले पढाएनन् । राजनीति मात्र गरे भन्दै लाखौं विद्यार्थीको भविष्यसंग गाँसिएका हजारौं विद्यालयहरुप्रति अविश्वास बढाउने कार्य भइरहेको छ । यस्ता अविश्वासलाई विश्वासमा परिणत गर्ने अभियान हो यो ।
सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तरमा सुधार ल्याई युग सुहाउँदो, मानवीय, गुणस्तरीय र व्यावहारिक शिक्षा उपलब्ध गराउन शिक्षकहरुले नै गर्न सक्छन् । यहि जिम्मेवारी महसूस गराउँदै शिक्षकको महत्व र गरिमा बढाउन प्रोत्साहित गर्ने अभियान पनि हो, यो ।
विद्यालय सुधार्न शिक्षक एक्लैले सक्दैनन् । तर, विद्यालय सुधार्न सबैलाई एकैठाउँमा ल्याउन शिक्षकले नै सक्छन् भन्ने अभियानको ठम्याई छ ।
‘शिक्षकले चाहे एकैछिन, अरुले चाहे वर्षदिन’ भन्ने विश्वासका साथ दोलखा जिल्लाबाट २०६८ सालदेखि यो अभियान अगाडि बढेको छ । हालसम्म यस अभियानमा उल्लेख्य मात्रामा उत्प्रेरक, शुभचिन्तक र सहयोगीहरुले हातेमालो गरिरहनुभएको छ भने हजारौं शिक्षक अभियानको साथमा हुनुहुन्छ ।
सामुदायिक विद्यालयहरुले सबैलाई मानवीय र गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्छन् भन्ने कुरा स्थापित गर्ने ।
‘शिक्षकले चाहेमा गर्न सक्छन्’ अभियान मार्फत् सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक अवस्थामा सुधार ल्याउन शिक्षकहरुको आत्मविश्वास बढाउने,
सामुदायिक विद्यालय सुधारमा संलग्न निकाय, संस्था तथा व्यक्तिहरुलाई एउटै मञ्चमा समेट्ने,
जिल्ला शिक्षा कार्यालय, स्रोतकेन्द्र, शिक्षकका ट्रेड युनियनहरु र शिक्षामा काम गर्ने स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरुमार्फत अभियानलाई संस्थागत गर्ने ,
‘शिक्षकले चाहेमा गर्न सक्छन्’ शैक्षिक अभियानको रुपमा स्थापित गरी ७५ वटै जिल्लामा पुर्याउने,
सञ्चारमाध्यमहरुबाट विद्यालयको सफलताका कथाहरु तथा अभियानको व्यापक रुपमा प्रचार–प्रसार गर्दै सिक्ने सिकाउने वातावरण तयार गर्ने गराउने ।
जिल्लास्तरीय अन्तरक्रिया संचालन गर्ने,
एकपटक कार्यक्रम संचालन गरिसकेको जिल्लामा करीब ४ महिनापछि पुनः मूल्याङ्कन कार्यक्रम आयोजना गर्ने,
आवश्यकता अनुरुप राम्रा र कमजोर भनिएका विद्यालयहरुको भिडियो निर्माण गर्दै राम्रा विद्यालयहरुको सफलताको कथाबाट केही गरौं भन्ने विद्यालयहरुका शिक्षक अभिभावकलाई हौसला प्रदान गर्ने,
‘शिक्षकले चाहेमा गर्न सक्छन्’ अभियानको तर्फबाट टेलिभिजन र रेडियो कार्यक्रम उत्पादन गर्ने,
अभियानका गतिविधि वेवसाइटमार्फत सवै शिक्षकबीचमा पुर्याउने र अभियानका गतिविधिहरु समेटिने मासिक बुलेटिन प्रकाशन गर्ने,
अभियानलाई संस्थागत गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालय, स्रोतकेन्द्रहरु, शिक्षकका टेड युनियनहरु, राजनीतिक दल, पत्रकार र गैर–सरकारी संस्थाहरुसंग समन्वय गर्दै प्राविधिक सहयोग गर्ने,
शुरुमा जिल्ला छनौट गरिनेछ । सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयसंग समन्वय गरिनेछ । अभियान बारे जानकारी गराइनेछ । आवश्यक डकुमेन्टहरुबाट कार्यक्रमको महत्व पुष्टि गरिसकेपछि कार्यक्रमको मिति तय गरिनेछ । निर्धारित मितिमा को र कस्को के भूमिका हुने विषयमा छलफल गरिनेछ ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयसंगको समन्वय र छलफलपछि भिडियो तयारीका लागि जिल्लाका ४ देखि ६ वटा विद्यालयको छनौट गरिनेछ । छनौट भएका विद्यालयहरु सदरमुकाम, सदरमुकाम आसपास र दुर्गम गाउँका प्राथमिक, माध्यमिक र उच्चमाध्यमिक हुनेछन् । यी विद्यालयहरु जिल्लाकै उत्कृष्ट, मध्यम र कमजोर सवै प्रकारका विद्यालय हुन सक्नेछन् । यद्दपि राम्रा विद्यालयलाई बढि प्राथमिकता दिइनेछ । जसबाट अरुका लागि अनुकरण गर्न सक्ने नमुना होस् ।
कसरी कुनै विद्यालयले राम्रो गर्न सक्छन् र कुनैले सक्दैनन् ? राम्रा भनिएका विद्यालयका शिक्षकहरुसंग जादुको कुन छडी छ ? भिडियो खिच्ने क्रममा खोजिने छ । भिडियोलाई अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा प्रदर्शन गरिनेछ ।
अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा निम्त्याइने कम्तिमा २ सय ५० शिक्षक, स्रोत व्यक्ति, विद्यालय निरीक्षक, अभिभावक, शिक्षकहरुका जिल्लास्थित ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरु, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु र जिल्ला शिक्षा कार्यालयका पदाधिकारीहरुबीच एकै ठाउँ बसेर छलफल गरिनेछ ।
अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा शिक्षकहरुका प्रतिनिधि, अभियानका सहयात्री र शिक्षाविद्हरुको सहभागिता रहनेछ ।
‘शिक्षकले चाहेमा गर्न सक्छन्’ अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको पूरै अवधि विद्यालय र कक्षाकोठा सुधार केन्द्रित हुनेछ । विषय इतरका कुरालाई शिक्षकको भूमिकासंग जोड्ने प्रयत्न गरिन्छ ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको विकास हुनेछ जसबाट विद्यालयको सुधारले गति लिनेछ ।
राम्रो काम गरिरहेका शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, शिक्षक अभिभावक संघ तथा अन्य सहयोगीहरुको हौसला बढ्नेछ । राम्रो गरौं भन्ने शिक्षकहरुलाई मार्गदर्शन मिल्नेछ र राम्रो गर्न नसकेका शिक्षकहरु विद्यालय सुधार्न क्रियाशिल हुनेछन् ।
सामुदायिक विद्यालयहरुप्रति अभिभावक र विद्यार्थीको विश्वास बढ्नेछ । जसबाट सामुदायिक विद्यालयहरु नै नेपालको विद्यालय शिक्षाका मेरुदण्ड हुनेछन् ।
सूर्योदय शैक्षिक प्रतिष्ठान, शिक्षा विभाग, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, शिक्षा पत्रकार समूह, शिक्षक मासिक, शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र
शैक्षिक अभियानका सहयोगीहरु
जिल्ला शिक्षा कार्यालय, शिक्षाविद्हरु, अभिभावकका संघसस्थाहरु, शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृनिकायहरु, शिक्षा पत्रकारहरु, शिक्षकको हकहितका लागि सक्रिय संस्थाहरु, विद्यार्थी हकहितका संघसंस्थाहरु, र शिक्षा सुधारमा सक्रिय निजी तथा सामुदायिक संस्था र व्यक्तिहरु ।
नोटः तपाईंहरु पनि यस्तो विचार गरिरहनु भएको छ भने आफैँ वा हाम्रो सहकार्यमा आपूmले सक्ने विद्यालय, स्रोतकेन्द्र वा जिल्लामा यस्तो अभियान सञ्चालनगर्न तत्पर हुनुहुनेछ । यस अभियानले त्यस्ता संस्थालाई प्राविधिक सहयोग गर्नेछ ।
सूर्योदय शैक्षिक प्रतिष्ठान
‘शिक्षकले चाहेमा गर्न सक्छन्’ अभियान
फोन नं. ०१–५२०१२८५, पो.व.नं. ७८६९, काठमाडौं
वेव साइटः www.tcmd.org
सूर्योदय शैक्षिक प्रतिठान टीम
डा. सुसन आचार्य
धनञ्जय शर्मा (अधिकारी)
डा. विष्णु कार्की
डा. भोलाप्रसाद दाहाल